Wiricheya Sarudzo idzo Dzinobatsira kune Yakatemwa Kufamba | KarmanHealthcare.com
Zvishoma kufamba inogona kunge iri mhedzisiro yekukuvara, chirwere, kurwadziwa kusingaperi kana arthritis. Izvi zvese zvinogona kukonzera matambudziko nekufamba uye zvinogona kukonzera kurasikirwa nemabasa ese emakumbo. Kunyangwe hazvo vanhu vaine izvi zvisingakwanisike, ivo vachiri kuda kufamba-famba zvakanyanya sezvinobvira. A wiricheya yemawoko yakakwana pakupa kufamba mune izvi zviitiko.
manyuwari mavhiripu dzakanakira avo vane zvishoma kufamba. Zvinoita kufamba zvirinyore kupfuura kusave neyako, kunyanya kune vanhu vane yepamusoro muviri kushandisa. Izvi zvinozovabatsira kuti vagare vakagwinya mundangariro nemumuviri.
Aya ndiwo anonyanya kufarirwa mavhiripu pamusika uye vanorema chero kubva 30 kusvika 50 makirogiramu. Mazhinji acho akagadzirwa nesimbi dzakasimba simbi uye haadhure uchienzaniswa nemamwe marudzi e mavhiripu. Vanogona kutakura kusvika 250 mapaundi.
izvi mavhiripu dzakanakira avo vane matambudziko ekufambisa mwero mavhiripu. Nekuda kweizvozvo vanhu ava vaizoda rubatsiro kubva kune vamwe vanhu nekuda kwavo kufamba kana kuti aizoenda nemagetsi wiricheya. Chiedza chisina kuremerwa mavhiripu vakachinja zvinoshamisa kuti vanhu vane kufamba matambudziko anoshandisa mavhiripu.
Izvo zvakavakwa nezvinhu zvisina kuremerwa senge aluminium uye akasiyana maalloys. Izvo zviri nyore kwazvo kufamba kune avo vane isina kusimba miviri yepamusoro uye kuyera chero kupi pakati pe15 kusvika makumi matatu emapaunzi zvichienderana nekugadziriswa kwavo. Kurema kwavo huremu hwakafanana neiyo wheelchair yakajairwa.
Chinhu chimwe chikuru nezve kureruka mavhiripu ndeyekuti ivo vava kugadzirwa nayo tsika maficha kune vanhu vanotungamira hupenyu hunoshanda. Aya asingaremi mavhiripu batsira vashandisi vanoshanda kuti vafambe nekukasira uye zvigaro pachazvo zvakatonyanya aerodynamic, izvo zvinoita kuti zvive zvakanaka kune wiricheya mitambo.
Heavy Duty mavhiripu
Kune rimwe divi reratidziro vari Heavy Duty mavhiripu ayo akavakirwa avo vane mashoma kufamba iyo inoda yakasimba wiricheya. Izvi Heavy Duty mavhiripu kazhinji inouya nezvigaro zve ergonomic uye semhedzisiro ivo yakakura uye inowanzo gadzikana.
izvi mavhiripu anonyanya kuve evashandisi vane akakura mafuremu emuviri kana akawandisa huremu. Vanogona kutakura anosvika mazana mashanu emapaunzi.
Kutakura zvinorema handiro chete basa rehuremu hunorema mavhiripu. Iwo akanaka ekumira akasiyana akasiyana ekunze terrains. Kana uine zvishoma kufamba asi uchiri kunakidzwa nekuve kunze, izvi zvingave zvakakwana wiricheya zvako.